महेश भट्टको मृ*त्युपछि छोरी पूजा भट्टको मु*टु हल्लाउने खु*लासा ! – ताजा समाचार
महेश भट्टको मृ*त्युपछि छोरी पूजा भट्टको मु*टु हल्लाउने खु*लासा !
एजेन्सी । नायिका एवं बलिउड फिल्म निर्देशक पूजा भट्टले पिता महेश भट्टको निध*नको खबर खण्डन गरेका छन् । प्रमाणको रुपमा उनले महेश भट्टका दुईवटा फोटो सेयर गरेकी छिन् जसमा उनी घरमा क्वालिटी समय बिताइरहेको देख्न सकिन्छ । वास्तवमा, सोसल मिडियामा महेश भट्टको हृदय*घातका कारण मृ त्यु भएको अफवाह फैलिएको थियो ।
पूजा भट्टले इन्स्टाग्राममा लेखिन्, ‘अफवाह फैलाउने र मेरो बुवा महेश भट्टको हृद*यघातका कारण मृ त्यु भएको खबर सुनेर दुःखी भइरहेका मानिसहरुका लागि यो प्रमाण हो । उनी सधैं झैं खतरनाक तरिकाले जीवनयापन गरिरहेका छन् त्यो पनि रातो जुत्तामा ।’